"Jehovah Tompo ô, … Ianao no Andriamanitra, ary marina ny teninao. 2 Samoela 7:28 Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay." 1 Petera 1:25
Misy sary vitsivitsy manampy antsika hahatakatra ny fihevitr’Andriamanitra :
- “Tsy tahaka ny afo va ny teniko? hoy Jehovah, ary tsy tahaka ny kanonta manorotoro ny vatolampy va?” (Jeremia 23:29). Ny Tenin’Andriamanitra dia toa afo mandevona ireo rijan-kevitra ataon’olombelona. Tsy mahajanona eo anoloan’ny Tenin’Andriamanitra ireo tomban-kevitra arosontsika. Ireo fanambaran’ny Baiboly dia miasa toy ny vely kanonta eo amin’ny fieritreretantsika, mamoha amin’ny torimaso sy manorotoro ny fo, mba hahatonga antsika hibebaka sy hiova fo.
- “Raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpankatò, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin’ny fitaratra izy; fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka amin’izay dia hadinony ny tarehiny” (Jakoba 1:23-24). Ny Baiboly dia toa fitaratra mampiseho ny toetrantsika, izay feno kilema. Aharihariny tsara fa mila famonjena isika, mba tsy hiharan’ny fanamelohan’Andriamanitra. Rehefa tonga saina momba izany isika, dia tsy tokony hanao fialana hoe tsy mety amintsika izany didim-pitsarana izany, fa tena aleo mamaly ny antson’ny Tompo Jesosy hoe: “Mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara” (Marka 1:15).
- Ny voa dia manana hery anaty hanomezana aina vaovao, ary toy izany koa ny Tenin’Andriamanitra, mamorona fiainana vaovao maharitra mandrakizay, ao amin’izay olona mino an’i Jesosy Kristy. “Efa teraka indray ianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lo, fa tamin’ny tsy mety ho lo, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra” (1 Petera 1:23).